Ngokushesha ngangokunokwenzeka in English. Ngokushesha ngangokunokwenzeka Meaning and Zulu to English Translation
Home>Words that start with A>As soon as possible>Ngokushesha ngangokunokwenzeka (Zulu to English translation)
What does Ngokushesha ngangokunokwenzeka mean in English? If you want to learn Ngokushesha ngangokunokwenzeka in English, you will find the translation here, along with other translations from Zulu to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Ngokushesha ngangokunokwenzeka meaning in English:
Ingabe ikhona i-Wi-Fi egumbini?
Nguliphi licembu ingabe ukusekela?
Nguwuphi umuntu kini ongathi?
Saya inyuvesi ndawonye
Sivakashela izihlobo zethu
Siyobonana amaminithi ambalwa
Wenzenjani athi lokho?